Programs | mmCert
Myanmar Cyber Security Challenge (2019)
Myanmar Cyber Security Challenge (MCSC) 2018
Cyber SEA Game 2015
Myanmar Cyber Security Challenge (2019) ပြိုင်ပွဲ
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် Myanmar Cyber Security Challenge 2019 ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆)ရက်နေ့၌ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ လူငယ်များအကြား ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာပြန့်ပွားစေရန်နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အခွင့် အလမ်းများ တိုးတက်လာစေရန်။
(က) ကမ္ဘာနှင့်တစ်ဝှမ်း ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုများ၊ ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများ တိုးတက် များပြားလာသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး၏ အရေးပါမှုကို သိရှိလာစေခြင်း၊
( ခ) လူငယ်လူရွယ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင် ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်နိုင်မည့်နည်း လမ်များအား ပိုမိုသိရှိလာစေခြင်း၊
( ဂ) နိုင်ငံတကာ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ထားသော မေးခွန်းများကို ဖြေဆို ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေခြင်း။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆)ရက်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ - ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနခန်းမ၊ ရုံးအမှတ်(၂)၊ နေပြည်တော်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိသူစာရင်းကြေညာခြင်း - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်။
ပြိုင်ပွဲလျှောက်လွှာပိတ်ရက် - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်။
မှတ်ချက်။ ပြိုင်ပွဲတွင် အသင်းပေါင်း (၂၀)သာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အချက် အလက် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားခြင်း မရှိသည့်အသင်းများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်(၃)ဦး မပြည့်မီသည့် အသင်း များအား ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ အရည်အချင်း ကိုက်ညီသည့် ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း(၂၀)ကျော်လွန်ပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၉)နာရီ၌ အွန်လိုင်းတွင် Forensics/Reverse Engineering/Probelm Solving နှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းတစ်ခုစီကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်အများဆုံး အသင်း(၂၀)ကို ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ချီးမြှင့်မည့်ဆုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(က) ပထမဆု - ငွေကျပ် (၁၀)သိန်း၊ Trophy၊ Certificate၊
( ခ) ဒုတိယဆု - ငွေကျပ် (၇)သိန်း၊ Trophy၊ Certificate၊
( ဂ) တတိယဆု - ငွေကျပ် (၅)သိန်း၊ Trophy၊ Certificate။
၆။ ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်-
(က) မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရပါမည်။
( ခ) လက်ရှိတွင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု၌ တက်ရောက်ပညာဆည်းပူးနေသူ ဖြစ်ရပါမည်။ (မဟာဘွဲ့လွန်/ ပါရဂူဘွဲ့ တက်ရောက်နေသူများ၊ အဝေးသင်ဖြင့် တက်ရောက်နေသူ များ ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ အသက်ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။)
၇။ အောက်ပါကဏ္ဍများကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်-
(က) Web Security
( ခ) Forensics
( ဂ) Cryptography
(ဃ) Problem Solving
( င) Reverse Engineering
( စ) Binary Exploits
မှတ်ချက်။ ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲတွင် MCSC (2018) ၌မေးမြန်းခဲ့သော Steganography နှင့် Miscellaneous ကဏ္ဍများအစား Problem Solving ကဏ္ဍကို အစားထိုးထားပါသည်။ Binary Exploits ကဏ္ဍမှာ Pwn ကဏ္ဍအား အမည်ပြောင်းလဲထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
၈။ ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ၀၈:၃၀-၀၉:၀၀ - ပြိုင်ပွဲဝင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
( ခ) ၀၉:၀၀-၀၉:၃၀ - အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ စည်းကမ်းချက်များ ရှင်းလင်း ခြင်း၊
( ဂ) ၀၉:၃၀-၁၆:၀၀ - ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊
(ဃ) ၁၆:၀၀-၁၇:၀၀ - ဆုချီးမြှင့်ခြင်း။
၉။ စည်းကမ်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာနမှဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။
( ခ) ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် စာရင်းပေးထားပြီး လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များအား ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရာသက်ပန် ပိတ်ပင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
( ဂ) ပထမဆုရရှိသည့် အသင်းမှ ပြိုင်ပွဲဝင် (၂)ဦးအား စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Singapore Cyber Conquest ပြိုင်ပွဲသို့ စေလွှတ်ယှဉ်ပြိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ပထမဆုရရှိသည့်အသင်းမှ အမှတ်အများဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင် (၂)ဦးကိုသာ စေလွှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။)
(ဃ) ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်စဉ်အတွင်း လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက် အသေးစိတ်အား ပြိုင်ပွဲမပြိုင် ခင်တွင် ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ ပြိုင်ပွဲလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက် နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ စည်ပင်ရိပ်သာ တွင် တည်းခိုနိုင်ရေးနှင့် ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်တွင် သွားလာရေးအတွက် ကြို/ပို့ယာဉ်များ စီစဉ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်းခိုစရိတ်နှင့် သွားလာစရိတ်များကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီမှ ကျခံ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
၁၁။ ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့ထက် နောက်မကျစေဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ (mmCERT)၊ Oversea Communications Building၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ၊ mcsc2019@ncsc.gov.mm သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပြီး ပြိုင်ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁-၆၅၀၈၉၁၊ ၀၁-၆၅၆၆၈၅ သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Yangon, Myanmar Cyber ​​Security Challenge 2018 contest, 2018 January0is held on the slide (25).
The purpose of being held
Myanmar youth called Cyber ​​Security awareness and improve skills.
An Earth0happy about Cyber ​​Crime by the threat from the booming Asian youth to learn the importance of Cyber ​​Security.
Young's Information Security and Cyber ​​Security career Cyber ​​Attack, and to learn about ways to prevent progress.
In accordance with international standards and haveagood experience by answering the Problem Set.
(A) competition to be held at 2018, January0Wah (25)
(B) competition to be held - Conference Hall, MICT Park
(B)alist of the tournament announced, 2018 January0Wah (20)
(C) application Holiday Contest - 2018 January0Wah (12)
Note. If the applicant exceeds the maximum (20) formed by the online exam will be chosen.. Online exams, 2018 January0Pickacheck on the slide (19).
Which will be awarded prizes
First Place - K (10) Thein + Trophy, Certificate
Second prize - K (7) Thein + Trophy, Certificate
Third-K (5) Thein + Trophy, Certificate
(1) Web Security
(2) Reverse Engineering
(3) Cryptography + Steganography
Those who take part in sports competitions
1. Must be Myanmar.
2. 2018 January 0, on the slide (25) (30) years of age must be large.
1. The leader ofateam must have0(3) members.
2. Must still learn the relevant permission from the school.
8:00 - 8:30 Registration & Preparation
8:30 - 9:00 Operation Ceremony
9:00 - 3:00 Myanmar Cyber ​​Security Challenge 2018 Competition
3:15 - 4:00 Awarding Ceremony
From the Ministry of Education and the Ministry of Transport and Communications will organize Myanmar Emergency Response Team (mmCERT) and Cyber ​​Sea Game Prize in 2015 in collaboration with some of the contestants Cyber ​​Security Competition (Base CTF) (state-level) competition to be held on 30-12-2016 . Forensics, Reverse Engineering, Computer Network Defence Cyber ​​Security Knowledge You can compete with anyone interested to participate in competitions.
Base CTF 2016 the purpose of being held
ASEAN STATES improve the countries' youth Cyber ​​Security Technical skill.
Burma's young people to become interested in Cyber ​​Security.
Asian Youth Cyber ​​Security system to ensure employment opportunities and
Asian youth through his knowledge of science to show strength.
Benefits Base CTF 2016
worldwide increased about Cyber ​​Crime threatens family in Burma for the youth of the Cyber ​​Security physical security become important to learn the job.
Young's Cyber ​​Security Technical Expert improving job.
In accordance with international standards and provide Cyber ​​Security Technical experts selected.
In accordance with the international standard answer Problem Set gain experience rated.
In collaboration with the Ministry of Communications and Information Technology Federation Myanmar meeting of the ASEAN-Japan Cyber ​​SEA Game (state-level) competition from 8-10-2015 9-10-2015 held until ဖြစ်ပါ. Forensics, Reverse Engineering, Computer Network Defence Cyber ​​Security Knowledge can compete with anyone interested to participate in competitions.3contestants will be competing inano age limit. Contestants will receive the total group (30) in the first, second, Third prizes will be awarded. The competition format will be held by the CTF Jeopardy Style.
Cyber ​​SEA Game
Japan, 2015, Tokyo In June, the annual ASEAN JAPAN Information Security JWG Meeting, the ASEAN Cyber ​​Seagame 2015 Be held in the first week of November in Indonesia and ASEAN countries Cyber ​​Defense expert (3) will compete individually. (3) the cost of the cost of the plane and, Will be the cost of provisions for Japan. JPCERT / cc choosing contestants selected will be sent to the Problem Set to race JPCERT / cc Expert (1) release. Selection to Yangon from October 2015 (8) (9) days after the by. Cyber ​​Seagame prizes to be awarded the team was invited to Japan Security Technical Workshop will The age limit is under the age of 30 can compete with anyone Cyber ​​Defense expert.
The purpose of the ASEAN-JAPAN Cyber ​​SEA Game being held
ASEAN-JAPAN Cyber ​​SEA Game Benefits
(A) competition to be held at 30.12.2016
(B) competition to be held in Yangon Computer University (UCSY)
(C) competition to be held at 08:00 hours in the morning (5:00 pm)
The competition to be held
Jeopard the questions in the form ofapuzzle that has chosen texts. Asafinal question, Forensics, Reverse, Engineering, CND (Computer Network Defence = Hardening) and Pentest point is to solve the problem. The group will be able to receive.
ASEAN-JAPAN Cyber ​​SEA Game contest, including those listed below will be allowed to compete.
Must of the Union.
2015, On 30 November (30) years of age and must be interested Cyber ​​Defense Savvy.
The leader ofateam must have0(3) members.
Still learn the relevant knowledge must have permission from the school. Terms and Rules Contest
Members mmCERT Cyber ​​Security Department about the staff who served in government00 not allowed to compete.
Applicants with application attach copies of the registration application.
Applications (28.9.2015) until4pm (00) hours or come in person to the address below or send an email to email address ictcompetition@gmail.com application must.
Application www.mcf.org.mm, www.mcpamyanmar.org is available to download and among www.mmcert.org.mm.
ASEAN-JAPAN Cyber ​​Sea Game Information for more details about the case 00 if the Myanmar Computer Federation Telephone 01-652307 and 2305233 may be in direct contact.
(A) application sent last hours, at4pm - 28.9.2015 (00)
(B) to gain access to competitions announced 30.9.2015 (Wednesday)
(C) Coaching for dates - 2-3.10.2015 (10 00) in the morning hours, MCF office (9), MICT Park.
(D) the state-level tournament which will be held at 8-9.10.2015
(E) fighting skills group, Indonesia - November In the first week.
Competitive travel dates